प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेको युग बितिसक्यो। तर क्षमता र ज्ञान का हिसाबले बाबुराम भट्टराई बढ़ी काबिल मान्छे हुन। पार्टी नेतृत्व मा आउने इच्छा पनि व्यक्त गरिसकेका। प्रचण्ड पनि प्रधान मंत्री भए, बाबुराम पनि भए। Morning shows the day भने जस्तो बाबुराम मा तुलनात्मक निकै बढ़ी क्षमता देखियो।
प्रचण्ड लाई वरिष्ठ नेता बनाएर बाबुराम पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्ने हो। तर त्यो हुन्छ कसरी? प्रचंड ले स्वेच्छा ले मान्छन् भन्ने कुरा बाबुराम को गल्ती हो। पार्टी अधिवेशन मा उम्मेदवारी दिने र जित्ने बाहेक अर्को बाटो छ र?
अर्को ३० वर्षको यात्रा आर्थिक क्रांति को हो भन्ने सन्देश का साथ बाबुराम अगाडि आउनु पर्छ। लोकतंत्र मा जनता जनार्दन। तर जनता को कुरा पछि हो। पहिला पार्टी कैप्चर गर्ने हो। प्रचंड को म्याद सकियो।
Baburam Bhattarai economic revolution Nepal Prachanda UCPN Maoist